Somali - Gundersen Health System
Home > Patients & Visitors > Social Services > Interpreter Services > Somali
Waxaad xaq u leedahay in aad fahamtid dhibaatooyinka kaa haysta caafimaadka, qorshaha daweynta iyo daryeelka, marka aad soo booqatid takhtarka. Waxaad xaq u leedahay in aad kaashatid turjubaan la tababaray haddii aad u baahan tahay mid.
Waxaad heli kartaa adeegga turjumada dhamaan luqadaha, maalin iyo habeen.
Turjubaanada waxay xafidi doonaan macluumaadkaada shakhsiga.
Weydiiso in qof ahaan laguu keen turjubaan, in uu kaala soo xariiro telefoonka ama Ipad, marka uu ku arko takhtarka, kalkaaliyaha ama shaqaale kale.
Naga soo wac telefoonka (608) 782-7300 ama telefoonka (800) 362-9567 haddii aad u baahan tahay turjubaan. Waxaan heli doonaa turjubaan marka aad na soo wacdid iyo marka aad u timaadid ballankaada.
Shaqada laga dalbado Gundersen Health System
Waxaan dhamaan dadka soo dalbada siinaa fursadaha sinaanta shaqada. Waxaa telefoonka laguugu siin karaa adeegga turjubaanka oo lacag la'aan ah marka aad soo wacdid ama aad qof ahaan timaadid si aad u ogaatid shaqooyinka jira. Waxaa dhici karto in aad u baahatid kaalmo ku saabsan buuxinta foomamka ama aad su'aalo ka qabtid habkena shaqaaleynta:
Kaalay Recruitment Services, 914 Green Bay Street, La Crosse.
Wac telefoonka (608) 782-7300 ama telefoonka (800) 362-9567
Waxaa laguugu xeri doonaa turjubaan.
Adiga iyo turjubaanka waxaad la xariiri doontaan xafiiska shaqaaleynta.
Noo sheeg waxa aad qabtid
Waxaan rabnaa in aan bukaankena siino adeegga iyo daryeelka ugu fiican. La hadal qofka adiga ku daryeela haddii:
Aad qabtid su'aal ama ay jirto arrin.
Aad dooneysid in aad qof uga mahad celisid daryeelka lagu siiyay.
Aadan helin daryeelka ama adeegga aad filaneysay.
Waxaad kaloo wici kartaa telefoonka (608) 782-7300 ama telefoonka (800) 362-9567. Waxaa la keeni doonaa turjubaan marka lagu soo waco. Wakiilka bukaanka ayaa dhageysan doono waxa aad rabtid in aad sheegtid. Waxaad noo soo diri kartaa email haddii aad doontid.
Haddii aad soo wacdid ama soo dirtid email, waxaan u baahanahay in aan ogaano:
Taariikhda aad soo booqatay
Kliinikada iyo waaxda aad soo booqatay
Faalada aad ka bixisid booqashadaada
Magacaada, cinwaankaada, iyo nambarka telefoonkaada haddii aad dooneysid in qof uu kula soo xariiro.
Haddii aad email noogu soo dirtid luqad kale, waa la tarjumi doonaa faaladaada. Jawaabta aan ku siino waxay qaadan doontaa xoogaa waqti dheeraad ah. Wac nambarada ku qoran liiska kore haddii aad degdeg ugu baahan tahay jawaab.